Tirada dembiyada uu boliisku ka guul gaaro ayaa kor u kacday 2017 - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hoggaamiyaha ciidanka ammaanka Dan Eliasson. sawir: Fredrik Sandberg/TT
Tirada dembiyada uu boliisku ka guul gaaro ayaa kor u kacday 2017
La cusbooneeyay torsdag 11 januari kl 09.50
La daabacay onsdag 10 januari kl 22.16
Markii ugu horreeysay muddo sannooyin ah ayuu ciidanka ammaanku dacwado dheeri ah u gudbiyay xeer ilaaliyeaasha. Dacwadaha kordhay ayaa la xiriira kufsiyada iyo naarkootika.
Halka dhanka kale ey hoos u dhaceen dacwadaha uu ciidanka ammaanku ka gudbiyey ee la xiriira dembiyada xoogga-middaasina ugu wacan yihiin is xabadeeynta, sida uu aamin-san yahay madaxa ciidanka ammaanku.
-Waxaannu ku guuleeysaney in aannu bedelno hoos u dhicii howlaha uu ciidanka ammaanku ku guul-darreeysto inuu dacwad ka gudbiyo, sida uu sheegay madaxa ciidanka ammaanka Dan Eliasson, oo ay wareeysi la yeelatay idaacadda SVT. Isagoo hadalkiisii sii watana sheegay:
-In loo baahan yahay in lagaga sii wanaag-sanaado ka guul gaaridda dembiyada xoogga ee sannadka 2018, kolka loo barbar-dhigo 2017, waxaana noo socda howlo aannu ku gaari doonno. Howlo badan ayaa halkaa nooga har-san, sida uu sheegay hoggaamiyaha ciidanka ammaanka Dan Eliasson:
Guud ahaan dembiyada uu ciidanka ammaanku u gudbiyay xeer-ilaaliyeyaasha ayaa kor u kacey 3,1 boqolkii.